कान नछामी कागको पछि नदौडनुस प्रधानमन्त्री ज्यु - Saptakoshionline
कान नछामी कागको पछि नदौडनुस प्रधानमन्त्री ज्यु
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २७, २०७५ समय: ८:०१:५७
कृष्ण जुनेली / निर्मलालाई न्याय देउ भन्दै सहरमा न्यायको माग गर्दै टाँसिएका पम्पेल्ट प्रहरीले च्यात्दै गरेको फोटो र भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । किन प्रहरी निर्मलासंग डरायो ? अनि नेपाल सरकारका प्रवक्ताले निर्मलाका विषयमा समाचार नछाप्न र प्रसारण नगराउन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिएको समाचार प्रकासमा आए किन सरकार निर्मलासंग डराएको छ ? चार महिना अघि बलत्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला किन यत्ती धेरै शक्तीशाली भईन ? सरकारले ज्यान गुमाई सकेकी निर्मलालाई किन यत्ति कडा आलोचक र प्रतिपक्षी देख्यो ?
सुदुर पश्चिमको कन्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तका बास्तवीक हत्याराहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले सकि रहेको छैन तर त्यही अपराध गरेको कसुरमा फेरिफेरि निदोर्षहरु पक्राउ पर्नेक्रम रोकीएको छैन । यस्तै विषयवस्तुहरु समेटीएका समाचारहरु मैले पनि धेरै पढे अनि सुने र हेरे । म पुर्वमा बसेर पत्रकारिता गर्ने मानिस निर्मलासंग जोडिएका विषयहरु प्रकासमा आउन थालेपछि मैले आफुले लेख्ने समाचार र आफुले काम गर्ने सञ्चार माध्यम भन्दा पनि बढी निर्मलासंग जोडिएका समाचार र विषयहरुमा ध्यान केन्द्रीत गरे । त्यसैले मैले निर्मलासंग जोडिएका सामाजिक सञ्जाल देखि सचारमाध्यमहरु मार्फत पढेका ,सुनेका र हेरेका विषयवस्तुहरुलाई केलाएर केही लेख्ने जर्मको मात्र गरेको हुँ । यसमा मैले आफना भाषा प्रयोग गरे पनि विषयवस्तुहरु तिनै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुलाई अधार मानेर तयार पारेको छु ।
जाडोयामको सुरुवात भई सकेको छ तर पनि निर्मला काण्डले मुलुक तातेको छ । मुलुकका सवै जस्तो ठाउँमा निर्मलाको बलत्कारपछि हत्याको विरोधका स्वरहरु गुञ्जीरहेका छन । एउटी बालिकाको निर्मम हत्या हुन्छ अनि हत्याराहरु पक्राउ पर्नुको साटो हत्यारा पक्राउ गर्न सहयोग पुर्याउने प्रमाणहरु एकएक गरि मेटाइन्छन । प्रमाण मेलाइन्छ अनि हत्याराहरु खोजी गर्न थालिन्छ त्यसले जनआक्रोश वढाउने काम गरेको छ । मुलुकमा दुई तिहारको दह्रो सरकार छ एउटी नावालिका बलत्कारपछि हत्याको शिकार हुन्छीन सरकार प्रमुखले सदनलाई हत्यारा पक्राउ परि सकेको भनेर गुमराहमा पार्दै जवाफ दिन्छ । सरकार प्रमुख सत्य र तथ्यमा नभएर अरुको भरमा गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्छन । हल्लाकै भर र अरुले कान भरेको भरमा सरकार प्रमुख ओठे जवाफ दिदै , उखान टुक्का जोडन । सरकार बलियो रहेको दावी गर्दै अपराध नलुक्ने ठोकुवा गर्छन तर सरकारको कार्यशैली देख्दा हो सरकार दुइ तिहाइको वन्दा बलियो भएपनि बर्तमानमा कम्जोर बन्दै आएको अनुभुति हुन थालेको छ । त्यसैको उदाहरण पनि निर्मला काण्ड वनेको छ । निर्मला काण्डले मुलुक मात्र नभएर अन्तराष्टिय स्तरमा समेत चर्चा पाउन थालेको छ । निर्मलाका हत्यारा पक्राउ गरि सार्वजनिक गर्न एका तर्फ दवाव रहेको छ भने अर्का तर्फ शक्तिशाली हत्यारा लुकाउनु पनि परे जस्तो देखिन्छ । निर्मला हत्याका विषयलाई लिएर वनाएका समितिले प्रमाण मेटाउने काम गरेको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई वुझाएको सार्वजनिक भएको थियो । केही प्रहरीहरु पनि निलम्वनमा परेका छन त्यसले पनि दालमा कुछ काला भने जस्तो भएको छ । प्रहरी प्रशासनको शिर निहुरिएको छ । प्रहरी प्रशासनको आलोचना वढेको छ । निलम्वीत एसपीले आइजीपीको निर्देशनमा जे भनियो त्यही आफुले गरेको हुँदा आफु निलम्वन हुँदा उहाँको फुली के हुन्छ भनी प्रश्न गरेको समाचार पनि पढेको थिए । त्यही समाचारमा आइपीजी पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा चलेको हुन सक्ने उनले संकेत गरेका थिए । यो विषयलाई गम्भीरताका साथ दुई तिहाईको सरकारले लिने कि नलिन ? पाटी एक भएपनि समिरकणमा सरकार बनेको जस्तो भएका कारण सरकार कम्जोर हुने ठानिएको त हैन ? हैन भने बादलको विकल्प खोजेर अर्कै गृहमन्त्री ल्याएर प्रभावकारी अनुसन्धान किन नथाल्ने ? दुई तिहाईको सरकार भन्दा शक्तीशाली को हो हत्यारा मुलुक मात्र हैन अन्तराष्टिय स्तरमा पनि चासो चिन्ता वढ्न थालेको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेका व्यक्ति हुन यात सार्वजनिक नगरि हत्यारा भनेर प्रचार गरिएका व्यक्ति हुन , किन र कसका लागि मोहरा बन्दै छन प्रश्न उक्जीएको छ । बलत्कार र हत्या आफुले गरेकोे भनेर किन सहज स्वीकाछन त्यसमा पनि केही राज लुकेको छ । मानव अधिकारको संरक्षणका विषयमा कलम चलाउने मलाई पनि यस्ता अपराध स्वीकार्नेहरुको हर्कद देखेर यो काण्डका दोषीलाई फाँसी दिनु पर्छ भन्ने तर्क गर्न मन लाग्यो । अरुको लागि सती जानेहरु कुनै न कुनै प्रलोभनमा परेर स्वीकार गर्ने सम्भावना बढ्यो त्यसैले वास्तवीक अपराधि पहिचान गर्न पनि यस काण्डका दोषीलाई फाँसीको घोषणा गरिनु पर्छ जसले गर्दा निदोर्षहरु सहजै हत्या आफुले गरेको भनेर स्वीकार्न नआयोस । अनि अहिले सम्मका गतिविधि हेर्दा डिएनएका लागि भनेर निर्मलाबाट लिएरको भनिएको नमुनाका विषयमा समेत आवस्त पार्न सक्नु पर्छ त्यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ जन्मीयो । साथै डिएनए पनि प्रहरीको प्रयोगशालामा हैन , अन्तराष्टिय मानव अधिकारसंग जोडिने स्वतन्त्र निकायको समन्वयमा गरिनु पर्छ हैन भने शंका कायमै रहने छ ।
केही समय यता देखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत निर्मला काण्ड चर्चाको विषय वन्ने गरेको छ । केही दिन अघि एक सार्वजनिक समारोहमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले हत्यारा चाडै सार्वजनिक हुने विश्वास दिलाउदै कसैलाई छाता नओढाउन अनुरोध समेत गरे । उनले प्रतिपक्षलाई इकिंत गर्दै भनेको यो भनाईमा सरकारले वास्तवीक हत्यारा पक्राउ गरे त्यसको प्रतिवाद गर्न गए प्रतिपक्षी जनताका पनि प्रतिपक्षी वन्ने तर्फ ध्यान दियोस । अनि निदोर्षलाई फसाइए कानमा तेल हालेर नबसोस । निर्मला काण्डमा जोडेर पक्राउ परेका तथा विभिन्न कारणले पिडित वनेकाहरुलाई सरकारले क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरोस । निदोर्षलाई दोषी करार गर्न राज्य कोष नखर्चियोस । विगतका सरकारहरुको निरन्तरता झगडामा मर्ने , लुटपाटका क्रममा मर्ने , अपराधिहरुले मारेकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्दै रकम दिए झै राज्यकोष खर्चिए झै अपराध स्वीकार गराउन निदोषका लागि राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने सस्कार नबसोस सरकार मेरो भन्नु यत्ती मात्र । अनि जादाजादै उखान टुक्कामा विश्वास गर्ने र रमाउने हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यु कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछापी कागको पछि नलाग्नुस ।